वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४ हजार १५३ नेपालीको मृ’त्यु ! – Halkhabar kura
१९ पुष २०७६, शनिबार २०:४२
वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४ हजार १५३ नेपालीको मृ’त्यु !
मुना कुँवर- हरेक दिन २ अर्ब रेमिट्यान्ससँगै दुईभन्दा बढी शव भित्रन्छ : ५ वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा ज्यान गुमाए, ५ सय ४५ अर्काको देशको जेलमा या’तना भोगिरहेका छन्, तीमध्ये २५ जनालाई मृ’त्यु-दण्ड-को स-जाय सुनाइएको छ, २५ कामदार विदेशकै अस्पतालको को’मामा मृत्यु-सँग लडिरहेका छन्, ३८८ कामदार कहाँ हराए कसैलाई पत्तो छैन, रेमिट्यान्सले देश चलाउन पल्केका राज्य सञ्चालकहरू युवालाई वैदेशिक रोजगारको भुंग्रोमा धकेलिरहेका छन्
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार मलेसिया नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य हो । र, वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये सबैभन्दा बढी युवाको मृत्युहुने मुलुक पनि मलेसिया नै हो । विगत ५ वर्षमा मलेसियामा मात्रै १ हजार ५ सय ३७ कामदारले ज्यान गुमाएका छन् । यो अवधिमा ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मलेसियाबाट आएको छ ।
त्यस्तै, साउदी अरेबियामा १ हजार १ सय ४७ जना, कतारमा ७ सय ७, युएईमा ३ सय ३७, कुवेतमा १ सय ४५, कोरियामा ७६, बहराईनमा ४८ र जापानमा १२ जनाले ज्यानगुमाएको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा यी ८ मुलकमा ४ हजार ९ जना कामदारले ज्यान गुमाएमा छन् । ती मुलुकबाट सरकारले २१ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्यारएको छ ।
५ सय ४५ जना जेलमा २५ जनालाई मृ-त्युद-ण्डको सजाय –वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली कामदारमध्ये ५ सय ४५ जना विदेशी जे’लमा छन् । तीमध्ये १९ जना महिला रहेको बोर्डको तथ्यांक छ । जेलमा रहेकामध्ये १९ जनालाई मृ-त्युद-ण्डको सजाय सुनाइएको छ । तीमध्ये मलेसियामा १६ जनालाई मृ-त्युद-ण्ड सुनाइएको छ । साउदी अरब रियादमा ५ जना, कुवेतमा ३ र युएईमा १ जनालाई मृ’त्युद’ण्ड सजाय तोकिएको छ ।
सबैभन्दा बढी मलेसियाको जेलमा- विदेशी जेलमा रहेका कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली मलेसियाको जेलमा २ सय ५ जना छन् । युएईमा १ सय ८५ जना, कुवेतमा ५८ जना, कतारमा ३५, साउदी अरबको जेद्दामा ३१, साउदी अरबकै रियादमा २३, बहराइनमा ५ र ओमानको जेलमा ३ जना कामदार छन् ।
३ सय ८८ कामदार हराए विदेशमै- वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक करिब १ हजार ५ सय नेपाली बिदेसिन्छन् । तर, कति कामदार बेपत्ता भए भन्ने यकिन तथ्यांक कतै पनि छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँग पनि यस्तो तथ्यांक छैन । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिमा बेपत्ता भएका कामदारको खोजी गरिदिन भनेर ३ सय ८८ वटा निवेदन परेको छ । त्यही आधारमा ३ सय ८८ नेपाली कामदार हराइरहेको भन्न सकिन्छ । तीमध्ये ७५ महिला छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार मलेसियामा २ सयजना कामदार हराएका छन् । साउदीमा ६७, कुवेतमा ४६, युएईमा २३, कतारमा २२ र अन्य मुलुकमा ३० जना कामदार हराएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी भन्छन्–विदेशमा मृत्यु हुनु सामान्य हो, हामी रोक्न सक्दैनौँ
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तुलनामा मृत्यु’को संख्या असाध्यै कम हो । विदेशमा दुर्घटना हुनु र मृत्य हुनु सामान्य हो, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ । तैपनि नेपाली कामदारको के कारणले मृत्युभइरहेको छ भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले अध्ययन गर्दै छ । कामदार जोखिममा पर्ने कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधान गर्ने कोसिसमा छौँ ।
Previous धनकुटालाई हिऊले ढाक्यो, हिउँ खेल्नेकाे ओईरो (भिडियो सहित)
Next “कसैले मा’रिदिए पनि हुन्थ्याे जस्ताे लाग्थ्याे” – दिल्ली काे’ठीमा सात वर्ष बिताएकी बालिकाको पिडा